Ukusetshenziswa kukalamula osheshayo
I-QUICKLIME ikhiqizwa nge-limestone equkethe inhlanganisela yama-calcium ne-magnesium carbonates. Kokubili i-calcium quicklime kanye ne-dolomitic quicklime ephezulu kukhiqizwa ngokushisa ama-limestone eluhlaza emgqonyeni kuze kufike emazingeni okushisa angama-900 degrees. Le nqubo ibizwa ngokuthi inqubo yokubala. T ...
Ukwethulwa okufushane komlilo we-lime mpo
Incazelo Yomkhiqizo Itiyela le-lime elime mpo libhekisa kudivayisi ye-lime calcining yokukhipha i-clinker ngokuqhubekayo engxenyeni engezansi yokuphakela okuphezulu. Inomzimba womlilo ovundlile, ungeza futhi udedele idivayisi nemishini yokungenisa umoya. mpo lime kuhhavini zingahlukaniswa f ...
Izici zokonga ugesi kanye nobungani bemvelo yelimu
Isikhuni se-lime esime mpo sisho ithuluzi lokubala i-lime ukukhipha i-clinker ngokuqhubekayo engxenyeni engezansi yokuphakela okuphezulu. Inomzimba womlilo ovundlile, ungeza futhi udedele idivayisi nemishini yokungenisa umoya. i-lime lime kuhilo ingahlukaniswa ngezinhlobo ezine ezilandelayo ...
Izinkinga okufanele zigwenywe ekukhiqizeni ama-kilns lime lime
I-1) Usayizi we-limestone mkhulu kakhulu: isivinini sokubala se-limestone sincike ekushiseni lapho ubukhulu bezinhlayiyana zokuxhumana kwe-lime nobuso be-limestone. Ezingeni elithile lokushisa, izinga lokubala kwe-limestone lincike kubukhulu betshe.
Industrial Park, Linyi Economic Development Zone, esifundazweni Shandong, China
Umphathi Wezokumaketha: U-Ella + 8615866201119 Umphathi Wezobuchwepheshe: Allen +8613953913090
Ukwenza I-calcium Hydroxide, Ukwenza i-Calcium Hydroxide, Calcium oxide Futhi Calcium Hydroxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide Production Line, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide, Igama Lwebhizinisi LeCalcium oxide,